Nawe Elandskop awumncinyane usuveze inkanyezi ngemfundo – Msunduzi News
Nawe Elandskop awumncinyane usuveze inkanyezi ngemfundo
KUHLALE kunezikhalo zokuthi izikole zakobantu emakhaya nasemalokishini zisilele emuva ngenxa yokungabi nezinsiza. Lokhu kuliqiniso elingephikwe. Omunye wabafundi abavela kulezi zikole ufakazele inkulumo yesiZulu yokuthi nembala nakwandlwana kuyanetha. Lo mfundi nguNqobile Nzimande (16) obefunda eLangsyde Combined School ogile izimanga. Le ntokazi ehlala kwaDeda e-Elandskop ibeke indawo yangakubo noMsunduzi ebalazweni njengoba iphume isibili kuzwelonke ezikoleni zakobantu (Quintile 2). UNqobile uthole o-A abayisi-7, wavele wenza ezibukwayo wathola ama-100% kuMathematics, ama-99% kuPhysical Sciences, wathola ama-94% ku-English ne-Economics, wathola ama-93% kuLife Sciences neLife Orientation, wavala ngama-85% e-IsiZulu. Le miphumela imenze wamenywa nguNgqongqoshe Wezemfundo uMhlonishwa u-Angie Motshekga emcimbini wokuklomelisa abafundi bakamatikuletsheni eGoli.
Ekhuluma naleli phephandaba uNqobile uveze ukuthi isifi so sakhe ngukuyofunda eNyuvesi yaseKapa lapho amukelwe khona ukuba ayokwenza izifundo ze-Actuarial Science. Uphinde waveza nokuthi okwenze aphumelele kube wukuzikhandla njengoba inhloso bekuwukuthi aye enyuvesi.
“Nginethemba lokuthi ukuphumelela kwami kuzovuselela ithemba kwabanye abafundi nakwabasuka ezindaweni zasemakhaya. Ngike ngiphatheke kabi uma ngibona iningi lisishaya indiva isikole nabanye abaphinde bashiye phakathi ngoba bethi kuyafana vele imisebenzi ayikho. Singalwa ngemfundo ekutheni sithuthukise izindawo zangakithi, ikakhulukazi thina boHlanga,” kusho uNqobile.
UNqobile uthe wathola ucingo mhla zingama-31 kuZibandlela ngonyaka owedlule nolwabe lumumemela emcimbini wabafundi abenze kahle. Lokhu uthi kwamenza woma ngoba akakaze acabange ukuthi nabakondlwana kuyabafanela ukuya ezindaweni eziphezulu nemicimbi esezingeni likazwelonke. “Ngijwayele ukubuka imicimbi yokuklonyeliswa kwabafundi kuthelevishini kodwa angikaze ngacabanga ukuthi ngelinye ilanga kungaba yimina oklonyeliswa emi kuleya ndawo,” kusho uNqobile oqhubeke wathi enye yezinto ezenze waphumelela wukukwazi ukuhlela isikhathi sakhe ngendlela nokuyinto athi wazifundisa yona.
Injabulo yomzali ibibonakala ebusweni. Unina kaNqobile uNkk uPhumzile Nzimande uthe uswele amagama namandla okubonga indodakazi yakhe ngendlela ebajabulise ngayo ekhaya. Ube esenxusa osomabhizinisi ukuba besekele indodakazi yakhe njengoba ingakawutholi umfundaze. “Ngeke azisole ozoxhasa indodakazi yami ngoba iyazinikela kakhulu emsebenzini wesikole. Ukuphumelela kwengane kungikhombise ukubaluleka kokwesekela izingane. Kumelekelele kakhulu ukuthi uyise wayenguthisha weMathematics neScience,” kusho uNkk uNzimande.
Wenabe ngokuthi uNqobile wayesekwazi ukwenza inxanxathela yezibalo esesemabangeni aphansi elekelelwa nguyise. Akakubalekelanga ukuthi yize ejabule kepha kumphatha kabuhlungu ukuthi ingane yakhe ingase iyofunda kude nekhaya.
“Bengazi ukuthi uNqobile wenza kahle esikoleni ngoba kusukela emabangeni aphansi othisha bakhe babengazisa ukuthi wenza kahle. Mina ibuye ingethuse nendlela abambabaza ngayo abantu,” kusho uNkk uNzimande.
Isikole iLangsyde sithole ama- 98.84%. Singesinye sezikole ezenze kahle eMsunduzi. Siphume isi-5 ohlwini lwezikole ezenze kahle, kanti isona esihambe phambili ezikoleni zakobantu eMsunduzi.
Ayewukela ngamanzi kuWadi 39
Izisebenzi nelima lokuhlanza idolobha
Intsha iletha uHulumeni emiphakathini
Previous post: UMsunduzi uziqwaqwade amakhanda kumatikuletsheni
Next post: Izinkinga zelasekhaya nomnotho wendawo